Caano Shubka Boqorka Daarood oo Maanta ka dhacday magaalada Qardho.
Sawirada Caleemo Saarkii Boqorka Daarood Halkan ka daawo...
C/llaahi Yuusuf oo ka qaybgalay Caleema Saarka Boqorka Beesha Daarood
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed oo doraad gaaray magaalada Garoowe oo xarun u ah Maamul Gobaleedka Puntland ayaa halkaasi waxa uu u tagay labo arrimood midda oo hore waxay ahayd ka qaybgalka caleema saarka boqorka Daarood iyo midda labaad oo ah sidii lagu sii dayn lahaa Markab Kalluumeysi oo leedahay Dowladda Yemen oo lagu haysto xeebaha Puntland.
C/llaahi Yuusuf ayaa markii uu ka soo degay garoonka Puntland waxa uu halkaasi ka jeediyey hadal gaaban, waxa uuna yiri “Yemen waxaa nagala dhexeeye xiriir ganacsi waayo sinaba uma kala maarano, ee waa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu sii daayaa markabka yemen”.
C/llaahi Yuusuf oo uu la socdo Safiirka Yemen ee Soomaaliya ayaa markiiba bilaabatay qabanqaabo ah sidii ay odoyaashu u sii deyn lahaayeen markabkaasi Kalluumeysi oo dhowr todobaad lagu haysto Xeebaha Puntland.
C/laahi Yuusuf Maanta ayuu ka qaybgalay caleema saarka Boqorka Daarood oo lagu magacaabo Boqor C/llaahi Boqor Muuse (Boqor King Kong), waxaa kale oo ka qaybgalay Isimo, Ugaasyo iyo Suldaano ka kala socday dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
C/llaahi Yuusuf oo hadal gaaban halkaasi ka jeediyey oo macnihiisu ahaa “Waxa uu yiri Boqorkaani waxa uu xukumaa deegaan aad u balaaran iyo bulsho aad u balaaran, waxaana looga baahan yahy in uu la yimaado karti iyo hufnaan”, waxaa kale oo uu Madaxweyne C/llaahi Yuusuf sheegay in doorashada maamul gobaleedka Puntland ay u dhacdo si cadaalad ah, isagoo u soo jeediyey dadka u loolamaya xilka madaxweynenimo ee Puntland in ay la yimaadaan tanaasul iyo dabacsanaan
Nov 27, 2008: Caano Shubka Boqorka Daarood oo Maanta ka dhacday magaalada Qardho.
Waxaa manta lagu qabtay beerta wayn Ceelmur ee magaalda Qardho Xaflad wayn oo laug caano shubayay Boqorka Daarod Boqor C/laahi Boqor Muuse (King kong), Xaflada Caano shubka boqorka daarod oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay dadwayne aad u farabadan oo ka kala yimi gobolada puntland iyo dalka dibadiisa .
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay isimada, cuqaasha, aqoonyahanada iyo culumaa udiinka Dawlad goboleeka Puntland, Sidoo kale waxaa xafladaan goobjoog ka ahaa Madaxweynayaasha Dawlada kumeel kaagra iyo Dawlad Goboleedka Puntland Mudane C/lahaai Yusuf Axmed iyo Mudane Cade Muuse Xirsi iyo Qaar ka tirsan Golayaashoda Wasiirada .
Kulankaan uu xiriiriye ka ahaa Majabe ayaa ugu horayntii waxaa lagu furay aayada quranka uu akhriyay shiikha caanka ah ee Sh. Cali Xiir, kadibna waxaa loo lagu soo dhaweeyay makarafoonka Nabadoon Maxamud Siciid Aw Muuse(afdiinle) oo halkaa ka soo jeedinaayay taarikhda ee soo martay boqortooyada daarod, sidoo kale waxaa isaga loo yeeray inuu ku hadlo Isimada Puntland Garaad Jaamac Garaad Cali oo u soo jeediyay boqorka talooyin iyo waano isaga oo tilmaamay inay isinimadu tahay hawl aad u adag oo culeesbadan ayna u baahan tahay dulqaad.
Waxaa isna halkaa khudbad xamaasad leh ka soo jeediyay Madaxwaynaha Dawlada Federaalka Mudane C/laahi Yusuf oo halkaa uga hanbalyeeyay Boqorka, Sidoo kale madaxwaynuhu wuxuu sheegay in loo baahan yahay in Hogamiye dhaqameedku ay kaalin wayn ka qaata Siyaasada Somalia oo ay xaliyaan khilaafyada iyo dhibaatoyinka ka horyimaada Siyaasiyiinta Somalia .
Ugu danbayntii waxaa halkaa qabsaday makarafoonkii abwaanka caanka ah ee Baarleex oo runtii aad u soo jiitay dadwaynihii halkaa kusugna iyado oo qaarkod hurdadi ka kiciyay, halmar ayaa waxaa la arkay dadkii oo sacab iyo mashxarad isku daray Abwaanka oo halkaa ka akhriyay murti iyo maaweelo ayaa lagu soo xiray xafladii kadibna waxaa lagalay qadadii sidaa ayayna ku soo gababoobday xafladii caana shubka boqorka Daarod Boqor C/laahi Boqor Muuse .
Taariikh nololeedka Boqorka Daarod oo kooban .
Cumar Maxamud Cumar Dheere